Lọ ọrụ - Winprt Technology Co., Ltd.
Guangzhou Winprt Technology Co., Ltd. ọkachamara na nyocha, mmepe na nrụpụta nke ndị na-ebipụta akwụkwọ: onye na-ebi akwụkwọ nnata ọkụ, onye nbipute akwụkwọ na onye nbipute a na-ebugharị ihe karịrị afọ 10. Anyị nọ ugbu a na Nansha Pilot Free Trade Mpaghara nke Guangzhou City nwere pụrụ iche adaba mbubata na mbupụ njem ohere.
Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nweta CCC, CE, FCC, Rohs, BIS asambodo maka nchekwa.Our factory nwere ihe karịrị ndị ọrụ 700 na ndị ọrụ R&D 30 nke ọma na usoro mmepụta nke ọma nwere ike ịchịkwa nkwarụ ọnụego nke ngwa nbipute ihe na-erughị0.3% .N'ihi nsonaazụ nke ngwaahịa na ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya, anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM na ODM maka ndị ahịa dị iche iche wee zute ndị ahịa afọ ojuju.
Dị ka na-eduga ika na ngwa nbipute, WINPAL-agbaso ngwa nbipute technology innovations, nọgidere na-emepụta ma na-arụpụta ọhụrụ ọtọ ebi akwụkwọ maka ahịa kwa afọ.With anyị elu àgwà ngwaahịa na pụtara ìhè ahịa ọrụ, anyị nwetara a zuru ụwa ọnụ ahịa netwọk na-eru ihe karịrị 150 mpaghara na mba, dị ka DUBAI, USA, BRAZIL, GERMANY, TURKEY, FRANCE, ITALITY, SPAIN, THAILAND, INDIA na ihe ndị ọzọ.WINPAL na-enwe ọganiihu na ndị mmekọ ụwa niile.
Na-ọkachamara emeputa nke na-ebi akwụkwọ na oru oma ọrụ soplaya.
Mepụta uru maka ọha mmadụ, nye ndị ahịa ọrụ, ma mezuo ebumnuche maka ndị ọrụ.
Ọrụ, Nwepu, Innovation, Karịrị.
Tụkwasị obi, Innovation, Creativity, afọ ojuju ndị ahịa, uru na-emeri mmeri.
Obi ,tọ, Ahụike, Uto, Ekele.
Onye na-ebipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, Wifi Receipt Printer, Nnata Printer, Nnata Mobile Printer, Onye na-ahụ maka nnata ihe ntanye 80mm, 80mm Kwesie Nnata Printer,